Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyada Victoriya iyo OYSU Melbourn oo ka qeyb galay Xaflad lana kulmay Madax kamida Dowlada Australiya
Jaaliyada Victoriya iyo OYSU Melbourn oo ka qeyb galay Xaflad lana kulmay Madax kamida Dowlada Australiya
Jaaliyadweynta Ogadeniya ee Victoria wadanka Australia iyo Ururka dhalinta OYSU Melbourn ee gobolkaas ayaa kawada qeyb galay Xaflad loo sameeyay Dadka qaxoontiga ah ee Victoria ku dhaqan. Xafladaas waxaa lagu soo bandhigay Filimaan lagu baraarujinayo bulshada islamarkaasna tilmaamaya qaxoontiga oo ka caawinaya sida loo raadsado shaqooyinka ama loo heli karo shaqo. Filimkan ayaa waxaa qarashka ku baxay bixiyay xafiisyadan afka qalaad lagu dhaho
(the Office of Multicultural affairs and Citizenship through the Refugee Action Program and at spectrum MRC and Brotherhood of St Lawrence. )
Jaaliyada ree Ogadeniya ee ka qeyb gashay barnaamijkan ayaa waxaa soo jiitay Calanka Ogadeniya oo Gidaarada mashraxa xafladan lagu xardhay iyo sharaxaado badan oo kale oo calanka Ogadeniya ah oo lagu sharaxay gidaarka iyo miisaska.
Xafladan ayaa lagu soo bandhigay Qadiyada Ogadeniya iyada oo laga waramay xaaladaha cunno yaraan iyo abaaro leh ee ku habsaday dhulkaas gumeysiga ku hoos nool. Sidoo kale waxaa laga waramay Xasuuqa joogtada ah ee Gumeysiga Ethiopia ku hayo shacabkaas. Waxaana diirada la saaray qaxootiga Ogaden kasoo qaxay ee ku sugan xeryaha Qaxootiga iyo meelo badan oo kamid ah Geeska Afrika.
Waxaa jaanis weyn ay u yeesheen Ururka Dhalinta OYSU melbourn iyo masuliyiinta Jaaliyada Ogadeniya ee Victoria inay la kulmaan laba wasiir oo kasoo qeyb galay xafladan oo lagu magacaabo Hon Nicholas iyo Adam. Waxayna jaanis u heleen ay gooni ula fadhiistaan labadaas wasiir iyaga oo kala hadlay xaaladaha Ogadeniya, islamarkaasna kala xaajoday waxa wadanka Australia oo Sanadkan qabtay Securityga UN-ta waxay ay ka qaban doonaan Qadiyada Ogadeniya. Wasiirada ayaa balan qaaday in arrintan ay dowlada sare gaadhsiin doonaan xidhiidh joogta ahna ay yeelanayaan Jaaliyada Ogadeniya ee Victoria.
Sidoo kale waxaa jaaliyadu ay la kulantay xubno kamida Police-ka Victoria iyo Jaaliyadaha Afrikaanka ee ku dhaqan Victoria oo kasoo qeyb galay xafladan, waxayna kawada hadleen sidii ay u xoojin lahaayeen xidhiidhkoodi soo jireenka ahaa.
Xafladan oo lagu soo bandhigay Hiddaha iyo dhaqanka ayaa waxaa kasoo qeyb galay Jaaliyada badan oo Afrikan ah Madax kasocotay dowlada oo ay kamid ahaayeen
Mudane Adam Bant (MP), Federal member for Melbourne and Deputy Leader of Greens Party and Hon Nicholas Kotsiras (MP) Minister for Multicultural Affairs and Citizenship kuwaas oo dhamaantood soo dhaweeyay xafladan kor loogu qaadayo wacyiga qaxootiga iyo isdhexgalka.
Waxaana xaflada lagu furay Koox ka socotay Kongo oo heeso soo bandhigay, sidoo kale waxaa lagu soo xidhay heeso African ah.
Guud ahaan xafladan ayaa u dhacday si heersare ah oo natiijo weyn u leh ururka dhalinta OYSU melbourn iyo Jaaliyadeynta Victoria.